USA oo sheegay raggii lagu beegsaday Baraawe iyo Telegraph oo shaaciyey saraakiil la dilay – Radio Daljir
USA oo sheegay raggii lagu beegsaday Baraawe iyo Telegraph oo shaaciyey saraakiil la dilay
Oktoobar 7, 2013 4:34 b 0
Nairobi, October 7, 2013 – Dowlada Maraykanka ayaa sheegtay in ay dileen xubno ka tirsan ururka Al-Qaacida oo xiriir la leh Al-shabaab, kadib weerarkii lagu qaaday degmada Baraawe Jimcihii ina dhaafay, xiligaas oo ciidamo Americaan ah tageen xeebta.
Wargayska The Telegraph ayaa sheegay in ciidamada khaaska ah ee USA gaar ahaan cutubkii dilay Osma Binladen in ay weerar ku qaadeen Baraawe, xigashooyinkii ugu dambeeyey ee USA laga sameeyey waxaa lagu sheegay in weerarka lagu dilay saraakiil caan ah.
Awab Al-cuqba oo ka mid ah saraakiisha Al-Qaacida oo dhalasho ahaan ka soo jeeda Suudaan iyo muwaadin kale oo isna ku jira saraakiisha sar sare oo ah Soomaali haysta dhalashada Sweden ayaa weerarka lagu dilay, sida lagu sheegay warbixinta wargayska.
USA waxay sheegtay in ay weerartay sarkaal lagu magcaabo Cikraama oo u dhashay dalka ?Kenya, kaas oo loo ?badinayo in uu lug weyn ku lahaa weerarkii Westgate mall.
Hugaamiyaha u dhashay Suudaan ee la yiraahdo Al-Cuqba ayaa la sheegay in uu tababar siinayey xubno ka tirsan ururka Al-shabaab gaar ahaan rag aad ugu dhow Axmed Godane, waxaana loo badinayaa in ragaas ay lug ku lahaayeen weerarkii Westgate ee Nairobi.
Cabdi qadar oo u dhashay Soomaaliya iyo Al-Cuqba oo u dhashay Sudaan waxaa la sheegay in labbaduba ay dhinteen daqiiqadihii ugu horeeyey ee rasaasta ay fureen ciidamada Maraykanka, balse difaac kala kulmay xubnha ka tirsan Al-shabaab.
Madaxweynaha Jubba oo iclaamiyey in aysan tegi doonin shirka arrimaha jubbooyinka Muqdisho
Haweenka Puntland oo odoyaasha ka codsaday in dumarka lagu daro Baarlamanka cusub (Dhegeyso)